Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo si buuxda isugu dhiibay sirdoonka ISRAEL - Caasimada Online
Home Dunida Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo si buuxda isugu dhiibay sirdoonka ISRAEL
Tel Aviv (Caasimada Online) – Wada-shaqeynta ka dhaxeysa sirdoonka Israel iyo Imaaraadka Carabta ayaa sanado badan daaha gadaashiisa laga waday, hase yeeshee warbixinno caalami ah ayaa kashifay heerka wada shaqeynta labada dhinac.
Wargeyska Times of Israel ayaa saddexdii bishan October qoray in mas’uuliyiita Sacuudiga ay barnaamij sirdoon oo Israel ay sameysay u adeegsadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dalka dibeddiisa ku sugan iyo kuwa shisheeye.
Warbixinta wargeyska Times of Israel ayaa timid ayada oo wargeyska New York Times ee Mareykanka uu 31-kii August qoray in Imaaraadka ay shirkad Israeli ah u adeegsadeen isku day ay ku doonayeen inay ku dhageystaan taleefonka amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Waxaa sidoo kale barnaamijkaas lagu jaajuusay taliyaha ciidamada ilaalada qaranka Sacuudiga Amiir Meteb bin Abdullah, oo markii dambe xabsi la dhigay. Waxa uu ahaa nin diidanaa in Maxamed Bin Salmaan laga dhigo dhaxal-sugaha.
Waa uu dhammaaday waqtigii Israel ay ahayd cadowga koowaad ee Carabta iyo Islaamka.